के छ तपाईंको मुख्य उद्देश्य मा देख एक प्रेमी र एक फ्रान्सेली एक? यो आवाज एक सानो बिट अस्पष्ट किन छैन तपाईं अध्ययन र मित्र बनाउन पहिलो, विशेष गरी महिलाहरुको दिनुहुनेछ भनेर तपाईं सबै भन्दा राम्रो सुझाव छ । फ्रान्सेली बालिका अधिक लागि देख प्रेम र आवेग भन्दा सामाजिक स्थान, मनोवृत्ति हामी हाजिर गर्न सक्छन्, केही देशहरुमा कहिलेकाहीं.
त्यसैले, विवाह छैन, चासो लागि एक विद्यार्थी । छैन सामान्यतया आशा दीर्घकालीन योजना यो प्रारम्भिक चरण मा छ । अर्को बाटो खोज्न छ एक डेटिङ साइट, मा केही राम्रो मान्छे तर धेरै को स्क्रैप छ । महिला मित्र को लागि यस. छ कि एक विचित्र प्रश्न, वा तपाईं हुनुपर्छ धेरै जवान र अनुभवहीन छ । आफ्नो उमेर, तर तपाईं के बुझ्न को संस्कृति देश र मानिसहरू जो तपाईं हुनेछ एक आगन्तुक प्रयास अघि एक दीर्घकालीन सम्बन्ध छ । यदि तपाईं मतलब एक दीर्घकालीन सम्बन्ध छ । यी उत्पन्न कहिल्यै छन् किनभने तपाईं को लागि देख तिनीहरूलाई विशेष गरी भने, तपाईं भाषा बोल्न छैन बुझ्न, संस्कृति र के थाहा यो संभावित उम्मेदवार आशा छ । यदि तपाईं लागि अर्थ शारीरिक सम्बन्ध, तिनीहरूले एकदम सजिलो द्वारा आउन फ्रान्स जहाँ यौन गतिविधि देखि कानूनी उमेर र छैन भन्दा सामाजिक परिस्थिति । यदि तपाईं मतलब एक»गर्मी टूट पडना», तपाईं पाउन सक्छ धेरै विवाहित वा मिलेर पुरुष»उपलब्ध»मा गर्मी जब आफ्नो साथी वा अन्य आधा छन् संग छुट्टी मा दूर छ छोराछोरीलाई, तर तिनीहरूले हुनेछैन देख कुनै लागि धेरै अब एक महिना भन्दा बढीमा छ । प्रयास गर्न छैन जस्तै हेर्न पश्चिमी तिर्नुपरेको को एक»चिनियाँ केटी», जसको अर्थ हो भने तपाईं साँच्चै जस्तै यी मध्ये एक विशेषण प्रयास, अधिक तिनीहरूलाई जस्तै हुन: बहिर्गमन, उत्सुक.
जोगिन सभा हो कि विशेष लागि बनाएको पश्चिमी मान्छे पूरा गर्न एशियाली (जे कारण लागि: भाषा, खाना, संस्कृति)
तपाईं छैन जरूरी को पूरा को सबै भन्दा राम्रो नमूनों बाहिर त्यहाँ र अधिक प्राप्त हुनेछ संभावना छ कि पाउन आफैलाई कसैले संग पहेलो ज्वरो । उह तपाईं हुनेछ एक विद्यार्थी । तपाईं पूरा हुनेछ प्रशस्त अन्य विद्यार्थीहरूको छ । यदि तपाईं जस्तै, तिनीहरूलाई केही, तपाईं हेर्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई फेरि । भने तिनीहरूले तपाईं जस्तै, तिनीहरूले चाहनुहुन्छ हुनेछ भनेर पनि । र त्यसपछि तपाईं दुवै मा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ केही सम्बन्ध छ, तपाईं हुनेछ.
विवरण मा निर्भर धेरै भिन्न व्यक्तिगत मान्छे, तर समग्र संरचना एकदम सरल छ, म जस्तो लाग्छ । मुख्य मुद्दा मान्छे भेट्न केही कारण लागि, तर तपाईं एक विद्यार्थी छन् भने, यो हो संभावना छैन समस्या छ ।
← एक बैठक लागि गम्भीर एक स्थायी सम्बन्ध - संघ जेन
एक आकस्मिक परिचय →